Beenin iyo Cambaarayn warka ku soo baxay widhwidh online ee Cinwaankiisu yahay “Xaabsade ayaa ka fikirey xeelado cusub oo uu ku soo nooleeyo colaadii Cagaarre”. | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > ALL DARWIISH NEWS	> Beenin iyo Cambaarayn warka ku soo baxay widhwidh online ee Cinwaankiisu yahay “Xaabsade ayaa ka fikirey xeelado cusub oo uu ku soo nooleeyo colaadii Cagaarre”.
Shabakada widhwidhonline iyo shabakadaha warka ay kala qaataan ee aad moodo dadka kale inaanay SSC ahayn,ayaa waliba Widhwidh online waxay caado ka dhigatay aflagaadaynta odayaasha iyo been abuur iyo waliba iska horkeenka beelaha tolka dhexdooda ah,waxaana kuugu daliil ah warka beenta ah ee ku soobaxay widhwidh Online ee soo baxay maanta 23/2/2011 ee Cinwaankiisuna yahay “Xaabsade ayaa ka fikirey xeelado cusub oo uu ku soo nooleeyo colaadii Cagaarre” ay hadda leedahay xaabsade ayaa soo noolaynaya colaaddii laga heshiiyay ee Baharasame iyo Cumar Maxamuud.
Waxaanu ragga qora widhwidh online ee ka soo jeeda ama wata magacii Beesha Barkad ugu baaqaynaa inaanay keenin Colaad dhexmarta Labada Beelood ee Baharasame iyo Barkad ama mid Bahararsame iyo Cumar Maxamuud.
Haddaad cid qabanaysaan oo aad wanaag wadaan qabta kuwa dad idinku gu xiga.
Kana joojiya colaadaha aad hurinaysaan ee Faarax garaad iyo dhulbahante hawd ba, ee laga soo maleegay dibadaha.
Xaabsade waxaannu wararka ku haynaa in uu ka shaqaynayo in qadiyada Kalshaale nabad lagu dhameeyo,ciidamadana laga qaado,waxaana cad in markasta oo wada hadal la wado ama ay timaado isku soo dhawaan inaad isaga ama odayaasha Buuhoodle aad war been ah ka qortaan.
Wixii hadda ka dambeeya ka aamusi mayno aflagaadada iyo colaadaha aad hurinaysaan.
Haddii deegaanada aad sheegteen wax ka dhacaana waxa masuuliyadeeda qaadaya waa idinka sababtoo ah idinka ayaa og hawshaa.
Waxaana dhammaan ugu baaqayaa Beesha qoriley,Kalabaydh iyo Saaxdheer inay la socdaan colaadaha aan qarsiga lahayn ee ay wadaan widhwidh online,ka hortagaana wax kasta oo nabada Cagaare wax u dhimaya.
Waxaan idiin sheegaynaa haddii aad wanaag dhulbahante aad mar doonaysaan annagu Boqol jeer ayaannu doonaynaa.
Beesha Qorileyna adeer rag yar yar baad tihiine cidina kama xigto Buuhoodle,Kalshaale,HagooganeQararo,haye,intaba Xabaalo ayay ku leeyihiin.
Waxaan idinkugu baaqaynaa inaad colaada aad Xaabsade u haysaan iyo Beeshiisa inaad cadaysataan, oo aad colaadda sokeeye ee aanay diyaarka u ahayn aad ula doonanaysaan, waliba Cagaare aad og tihiin “inta rag nooga maqan” ee aannu “tolnimada” ka dooranay.
Haddii aad joojin weydaan hurinta fidnada Colaadii Cagaare ee u dhaxaysay Bahararsame iyo Cumar Maxamuud iyo waliba baroorta beenta ah ee aad Xaabsade iyo Baharasame ugu dhuumanaysaan, waan is difaacaynaa Af iyo Addinba,sababtoo ah tolnimada wax ka baxsan ayaad wadaan.
Waana ognahav xaqiiqda in ta been abuurka qoraysaan maxaad u sheegi la’dihiin ragga Barkad ee maalintii dhawayd raggu isaga dhintay iyadoo xabaddii kalshaale socoto,iyo sababta ay ku dhinteen.
Waad la socotaan annaga ragayagii inuu ku dhintay maalintii dhaweyd Kalshaale,miyaanay ku dhiman rag garaad maxamed ah,xaggee widhwidh online Jirtay iyo tolkaa!!!!!!!!!!!
Xaabsadena waxaan ugu baaqaya inuu ka aamuso oo uusan ka hadlin qadiyada Buuhoodle,maadaama ay colaadan Buuhoodle ka socota,aysan lahayn reer Buuhoodle meel loo raaco oo ay ukala qaybsan yihiin Puntland, Somaliland,SSC,Sh. Shariif,Xabashi,iyo ku wa leh annagaa reer hebel ah.
Waxaan tacsi gaar ah udiraynaa eheladii raggii ku geeriyooday dagaalkii Kalshaale,Hagoogane iyo Meygaagle colaadaas oo laga soo maleegay Jihooyin badan, looguna tala galay in lagu burburiyo Faarax Garaad iyo Dhulbahante Hawd,laguna tartamayo Buuhoodle.
Waxaan kale oo aanu idin xusuusinaynaa in aanan raali ku ahayn xilka Wasiirnimo ee Warfaafinta ah ee uu Somaliland ka hayo Xaabsade iyo waxa uu ku hadlayo.
Xaabsade na waxaanu ugu baaqaynaa in uu iska casilo xilkaas,kuumana qalmo xilkaas,waaba naloo ku soo dhuuntay xilkaase.
Waxaan kaloo u digaynaa Shabakadaha Kale ee Waliba ka soo jeeda Beesha Sool iyo kuwa kale inay ka foojignaadaann wixii keenaya isku dhac Beeleed.
Buuhoodle:Dagaal is tuur tuur ah oo la ga soo sheegayo Colaadii Kalshaale Buuhoodle:Waa Jihaad Dagaalka Kalshaale – Culumada Gobolka Cayn -AKHRI/DHAGEYSO